चियामा पनि आज खासै स्वाद छैन सायद चिनिको ठाउँमा उखु किसानहरुको आँसु परेर होला ! – Khabaarpati
चियामा पनि आज खासै स्वाद छैन सायद चिनिको ठाउँमा उखु किसानहरुको आँसु परेर होला !
December 15, 2020 December 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on चियामा पनि आज खासै स्वाद छैन सायद चिनिको ठाउँमा उखु किसानहरुको आँसु परेर होला !
चिनी मिलले दिन बाँकी उखुको पैसा दिलाइदिन माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरु काठमाडौं धाइरहेका छन्। गत वर्षदेखि हिउँदको चिसो काँप्दै काठमाडौंसँग आशाको नजरले हेर्दै छन् उनीहरुले। केही दिनअघि काठमाडौं आएका उनीहरुले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। केही चिनी मिलले किसानमाथि भारतीय नागरिकको आरोप लगाउँदै पैसा दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरुले माइतीघरको सडकमै नागरिकता समेत देखाए। पैसा नपाएपछि ऋणमा डुबेका किसानले माइतीघरमा आँशु नै झार्न पुगे।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
कोभिड–१९ को संक्रमणकालिन अवस्था त्यसमाथि पनि उद्योगको निरन्तरको घाटाको व्यापारमा समेत उद्योगले किसानहरुको भुक्तानी नरोकेको बेला अनावश्यक बार्गेनिङ गरेर बिचौलियाले किसान उचाल्ने काम गरेको मिलको आरोप छ ।मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्नपूर्ण सुगर मिलले नामै तोकेर किसानको नाममा आन्दोलन चर्काउने विचौलियाले उद्योगसँग पटक पटक गरी बार्गेनिङ गरेर झण्डै ४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लगेको आरोप लगाएको छ ।
उखु किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको तर आफूलाई कृषक भन्ने संघर्ष समितिको सचिव हरिश्याम राय वास्तविक किसान नभएर विचौलियाँ भएको उद्योगको आरोप छ । उनले उद्योगसँग वार्गेनिङ गर्दै पटकपटक गरी कुल ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार ८ सय ९९ (रु.३,३३,९२,८९९) रुपैयाँ लगेको जनाएको छ ।रायले पैसाका लागि उद्योगसँग बारम्बार बार्गेनिङ गर्ने गरेको र पैसा नदिए किसान उचालेर आन्दोलन चर्काउछु भनेर आफूहरुलाई धम्की दिने गरेको समेत उद्योगले बताएको छ ।त्यसो त विचौलियाँ रायले भुक्तानी नपाएका किसानसँग उखुका पर्ची सस्तोमा किनेर उद्योगलाई महँगोमा बेचेर करोडौं कुम्याउने गरेको समेत उद्योगले आरोप लगाएको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
January 22, 2021 goodmam
May 18, 2021 May 19, 2021 goodmam
‘धेरै ठूलो सपना र आशा बोकेको छैन’ भन्दै सबैलाई रुवाएर अस्ताए संचारकर्मी धर्मेन्द्र
March 8, 2021 goodmam